AKHRISO:- Galmudug oo baaris ku bilowday Askartii ka dambeysay dagaalkii Guriceel | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka AKHRISO:- Galmudug oo baaris ku bilowday Askartii ka dambeysay dagaalkii Guriceel
AKHRISO:- Galmudug oo baaris ku bilowday Askartii ka dambeysay dagaalkii Guriceel
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Galmudug, Gaashaanle Dhexe Cabdulaahi Abuukar Xassan iyo saraakiil sare oo ka socota Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa galabta ka dagey Degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Gudoomiyaha ayaa u tagay baarista dagaal dhex marey ciidamo ka tirsan Booliiska iyo GorGor horaantii todobaadkan.
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida qaybta Galmudug ayaa sheegay in dirirta ciidamada dhex martay ee guriceel iyo Dhuusamareeb ka dhacdey ay aheyd mid ka baxsan dhaqanka suuban iyo shuruucaha ciidanka.
Waxaa uu balan qaadey in cid kasta oo baarista socota ku cadaato in ay ku lug laheyd Mas’uuliyada dagaalkii dhacey, la marin doono sharciga, maadaama dadaalada ciidanka dhex marey sababeen dhimasho iyo dhaawac.
Baarista hordhaca ah ayaa lasoo wariyey in ay durba kiiskan ku lug yeesheen saraakiil ka tirsan Booliiska iyo Milatariga oo maxkamada kasoo hor muuqan doona todobaadyada soo socda.